JAZZUARY: Nasongadin'i Bruxelles ny jazz tamin'ny volana Janoary
Home » Lahatsoratra farany farany » Kolontsaina » JAZZUARY: Nasongadin'i Bruxelles ny jazz tamin'ny volana Janoary
Vaovao Mafana Belzika • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Kolontsaina • Hospitality Industry • Vaovao • Safety • Tourism • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Nasongadin'i Bruxelles tamin'ny janoary ny jazz
The renivohitr'i Eropa hihozongozona ny feon'ny jazz amin'ny fiandohan'ny taona 2020. Manomboka amin'ny 8 ka hatramin'ny 25 Janoary 2020, fety jazz telo tsy latsaky ny telo no hisongadina ao Brussels'fiainana ara-kolontsaina: ny Fetiben'ny Jazz any Bruxelles, ny Fetiben'ny Jazz renirano ary ny Djangofolllies. Hetsika telo tsy azo lavina miaraka amina miavaka telo izay hampiseho talenta vaovao avy amin'ny sehatra jazz belza sy ny kintana iraisam-pirenena.
Bruxelles, jazz azo antoka
Amin'ny maha toerana nahaterahan'ny saxophone azy, ny renivohitra belza dia nanjary fijanonana ilaina ho an'ireo mpitendry sy tia an'io karazana io. Bruxelles no tanàna misy kaonseritra jazz isan-kapita ambony indrindra eran'izao tontolo izao, aorian'ny New York sy Paris. Avy amin'i Toots Thielemans, hatrany amin'i Philip Catherine, Steve Houben, Mélanie De Biasio, Eric Legnini, ary Charles Loos, ireo masoivohon'ireo jazz belza any ivelany ireo dia manana rohy akaiky amin'ity tanàna ity, izay mahatsapa tsara ny milalaovana sy mizara ny mozikanao. Miaraka amin'ny fety maro, efitrano fampisehoana, klioba ary conservatories marobe, ny jazz dia miparitaka ary re any amin'ny toerana rehetra, amin'ny fomba rehetra, mandritra ny taona ary mandritra ny alina.
Ny iray amin'ireo zava-nisongadina tamin'ny kalandrie jazz Bruxelles tamin'ny volana Janoary. Hatramin'ny 2016, visit.brussels dia nanasongadina ity tolotra miavaka ity amin'ny fampielezan-keviny JAZZUARY.
Brussels Jazz Festival, hetsika isan-taona ho an'ireo tia jazz
Flagey dia manolotra andro firavoravoana 11 mitambatra, toy ny mahazatra, kintana iraisam-pirenena miorina sy zavatra hita avy amin'ny sehatry ny jazz eo an-toerana. Ilay mpilalao amponga any Bruxelles manana talenta Antoine Pierre no ho mpanakanto monina ao ary hanolotra tetikasa telo, ao anatin'izany ny famoronana vaovao roa. Drummers dia haseho amin'ity festival faha-6 ity, ankoatra ny hafa, Lander Gyselinck (St6cks), Tom Skinner (Wildflower), Makaya McCraven ary Anton Eger amin'ny fandaharana. Ny sain'ny mpamaritra anarana dia hita ihany koa amin'ny marika roa: ny belza avy amin'ny WERF Records (Commander Spoon, Boyan Z, MDCIII, sns.) Ary ny Amerikanina avy amin'ny Anthem iraisam-pirenena (Jeff Parker, Sampana Jamie, sns.). Ny fikororohana ny mofomamy dia ny Belza Mélanie De Biasio, izay hanokatra ny fety amin'ny kaonseritra roa miavaka hanohanana ny studio-ny mpanakanto vaovao ao Charleroi.
Flagey - manomboka amin'ny 8 ka hatramin'ny 18 Janoary
Ny River Jazz Festival, dingana telo hanitarana ny faravodilanitra
Ny afisy amin'ny criss-édition faha-6 eo amin'ny CD vaovao (Macha Gharibian Trio, na Bareket Quartet, Quentin Dujardin ary Didier Laloy, Bai Kamara Jr.), duet mipoaka (David Linx & Michel Hatzigeorgiou, Igor Géhénot & Amaury Faye), wild ensembles (Rêve d'Eléphant Orchestra, Géraud Portal dia milalao Mingus), vahiny malaza (Sal La Rocca Quartet feat. Stéphane Belmondo) ary fomban-drazana sy fotony (Alexandre Cavalière Quintet, Simin Tander). Ahitana kaonseritra ataon'i Manuel Hermia, fampirantiana ny sokitra nataon'i Jean-Claude Salémi ary fandaharana iray nataon'i JP Schroeder an'ny gitara Philip Catherine. Zava-nisongadina tamin'ny festival, ny River Jazz Night, izay manidy ny hetsika amin'ny faha-25, amin'ity taona ity, no hatsangan'i Stéphane Galland, mpitsangantsangana beleniana talenta (Aka Moon…).
Teatra Marni, gara Jazz, Le Senghor - 9 hatramin'ny 25 Janoary
Djangofolllies, festival Belza natokana ho an'ny jazz Gipsy
Ity hetsika ity dia mampivondrona ireo mpitendry mozika ambony sy fihaonana mozika manaitaitra eo anelanelan'ny taranaka sy ny fomban-drazana ary ny fanavaozana, samy manome voninahitra ny lova navelan'i Django Reinhardt. Ny vondrona Jazzy Strings, fiaraha-miasa mahatalanjona misy eo amin'ny ray telo sy zanaka telo lahy (Schmitt, Cavalière, Debarre), dia hanokatra ny fety ao Bruxelles ho an'ny voalohany amin'ny AB. Ny fandaharana amin'ity andiany faha-6 ity dia misy koa ny Kamao Quartet miaraka amin'i Tcha Limberger belza malaza, "ny mpanjaka mozika Gipsy" (The Times), ny quintet an'ny lokanga lokanga Alexandre Cavalière, ny trio Dan Gharibian, ary, farany, ilay vaovao quartet an'ny Fapy Lafertin.
Ancienne Belgique, Les Riches-Claires, Flagey, Station Jazz, Muziekpublique, Kunsthumanoria - ny 14 ka hatramin'ny 25 Janoary any Bruxelles